'कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको अन्तिम संस्कारमा परम्पराको पालना हुन नसक्नु गम्भीर कमजोरी' | Ratopati
personशंकर पोखरेल exploreकाठमाडौं access_timeजेठ १७, २०७७ chat_bubble_outline0
कोभिड १९ का कारण सिर्जित भय र त्रासले नेपाली समाजको एउटा तप्का अमानवीय र बर्बर बन्ने अवस्था देखियो । जिम्मेवार व्यक्ति र निकाय यस विषयमा समयमा नै गम्भीर नहुने हो भने यसले कोभिड १९ महामारी विरुद्धको संर्घर्षलाई नै कमजोर बनाउने छ ।
वास्तवमा भाइरस प्रत्यक्ष सम्पर्कवाट सर्ने हो नजिकको ठाउँमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन राखेर होइन भन्ने कुरा पनि अझैसम्म स्थापित गर्न सकिएको छैन । यतिसम्मको चिकित्सक र स्वास्थकर्मीमा समेत यस विषयमा पर्याप्त भ्रम देखिन्छ ।
कोरोनाको उपचारका सन्दर्भमा सुरुमा डरमान्ने र पछि सहजहुने अवस्था आम रुपमा देखिएको छ । कोरोनाको उपचारका लागि तयार गरिएका अस्पतालमा बिरामी लगेर नराख्दासम्म डर रहिरहने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले उपचार हुने सबै अस्पतालमा निश्चित संख्यामा बिरामी पठाएर मानसिक रुपमा तयार गर्नु राम्रो हुन्छ ।बिरामीको उपचार गर्न सुरु गरेपछि चिकित्सक र स्वास्थकर्मीमा डर हटेको र मनोवल बढेको देखिन्छ ।
यतिसम्मकी पछिल्लो समय संक्रमितहरु ठुलो संख्यामा भेटिएका र उपचार पछि निको भएका ठाउँमा आम मानिसमा भय र त्रास कम हुँदै गएको र त्यहाँको परिस्थिति सामान्य वन्दै गएको देखिन्छ ।
क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनका कारणले बस्तीमा सर्छ भनेर रोक्न खोज्ने कुरा अत्यन्त बेठिक र भ्रमपूर्ण कुरा हो । सबैभन्दा पहिले कोभिड १९ को उपचार गर्ने काठमाडौंको सरुवा रोग उपचार अस्पताल रहेको टेकु र पाटन स्वास्थविज्ञान प्रतिष्ठान रहेको लगनखेलमा किन संक्रमण फैलिएन । किन विराटनगर र धरान भन्दा उदरपुर र झापामा बढी संक्रमण देखियो । किन कोरोना विशेष अस्पताल रहेको वुटवल र भैरहवामा भन्दा बढी कपिलवस्तुमा देखियो । किन खजुरामा भन्दा आढी नरैनापुरमा देखियो ? किन रोग पत्ता लागेपछि समुदायमा पुगेको कोरोना भाइरस उदयपुर, नेपालगन्ज र वीरगन्जका बस्तीमा समेत नियन्त्रणमा आयो । कुरा स्पष्ट छ संक्रमण फैलिनुमा संक्रमित पहिचान नभएर नै हो । संक्रमितलाई पहिचान गरेर आइसोलेसनमा राख्ने हो भने संक्रमण फैलनवाट रोकिन्छ । रोकिँदै आएको हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ ।
यतिबेला क्वारेन्टाइन भित्र संक्रमण बढी देखिनुको कारण वबहिरनै संक्रमित भएर आएका र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुले एक आपसमा सामाजिक दुरी कायम नगरेका कारणले हो । क्वारेन्टाइनमा ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिए पनि त्यो त्यति जोखिपूर्ण छैन । किनकी उनीहरुको ठुलो हिस्सा युवाहरुको छ र उनीहरु समाजमा मिसिएको अवस्था छैन । पहिचानगरी समयमा उपचारको प्रकृयामा लाने हो भने उनीहरुलाई सहजै निको बनाउन सक्ने देखिन्छ । तर संक्रमितहरु पहिचान नभइ समाजमा पुगेर दीर्घ रोगी र वृद्धवृद्धामा संक्रमण फैलियो भने स्थिति जटिल बन्छ । यस्तो कुरामा सबैको ध्यान जानु पर्दछ । सचेत पंक्तिले भन्नु पर्दछ क्वारेन्टाइन राखेका कारणले सम्पर्कमा नपुगेका मान्छेमा भाइरस सरेको छैन र सर्दैन ।
स्वास्थकर्मी र जनप्रतिनिधिको निगरानी रहेका क्वारेन्टाइमा समेत सामाजिक दुरी कायम गर्न समस्या देखिएको छ । तीनै व्यक्तिहरुलाई सिधै आफ्नो घर र बस्तीमा पठाउँदा के होला ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । निश्चित छ सिधै बस्तीमा पठाउँदा पहिचानमा नै समस्या हुन्छ । अनि आवश्यक सतर्कता कायम गर्न सकिँदैन र संक्रमणको जोखिम बढ्न जान्छ । यस्ता विषयमा संचारमाध्यमले विज्ञहरु मार्फत भ्रम चिर्न सहयोग गर्नु पर्दछ । अन्यथा हाम्रो समाजमा कोभिड १९ संग जोडिएर सिर्जना भएको भय र त्रासले नै हामीलाई महामारीसँग जुध्न कठिन बनाइदिने छ ।
जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा क्वारेन्टाइन बनाउन नदिन अवरोध सिर्जना गरिएका समाचारहरु आइरहेका छन् । अनि राजधानीकै विद्युतीय सवदाहगृहका संचालकहरु तालावन्दी गरेर भागाभाग भएका समाचार आइरहेका छन् । अस्पतालमा बिरामी राख्न डाक्टर समेत तयार नभएको कुरा आइरहेका छन् ।
समाजमा व्याप्त भ्रमका कारणले मृतकको दाहसंस्कारमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । घाटमा लगरेर शव जलाउने कुरा समेत रोकिएको छ । ठुलो संख्यामा मृत्यु हुँदाको अवस्थामा नियमित प्रकृयामा जान नसक्नु स्वभाविक हो । तर एउटा दुईवटा मृतकको अन्तिम संस्कारमा परम्पराको पालना हुन नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो । यतिसम्मकी भयका कारणले परिवारका सदस्यहरु समेत नजिक नपर्ने स्थिति देखिएको छ । जबकी जिवित मान्छेबाट भन्दा मृत मान्छेवाट भाइरस सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । किनकी जिवित मान्छे बोल्दा र हात्च्छेउ गर्दा भाइरस शरीरबाट बाहिर आउँछ । तर मृतकको शरीर स्थिर भएको अवस्थामा त्यो सम्भावना हुँदैन । तर यतिबेला भाइरसको डर जिउँदा मान्छेसंग भन्दा बढी मरेको मान्छेसँग देखिन्छ । यो कुरामा पनि आवश्यक सचेतनता जगाउने काम हुन सकेको छैन ।
नेपालमा दुईजना व्यक्तिको हकमा दाहसंस्कार पछि मात्र संक्रमणको रिपोर्ट आएको थियो । ती व्यक्तिहरुको दाह संस्कारमा सामेल भएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको प्रमाण अझैसम्म पाइएको छैन । जिवित संक्रमितको सम्पर्कको तुलनामा मृतकलाई छुदा मानिसले बढी सरसफाईमा ध्यान दिएका कारणले पनि संक्रमण नफैलिएको मान्न सकिन्छ । यस्ता कुरा पनि हाम्रा सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विषय हुन् ।
कोभिड १९ का महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व गरिरहेको स्वास्थ मन्त्रालय यस्ता विषयमा गम्भीर र संवेनशील बन्नु पर्दछ । हरेक घटनाको तथ्यपरक विश्लेषण गरी भय र त्रास अन्त्य गर्नु पर्दछ । संक्रमित क्षेत्रबाट आएका नागरिक, संक्रमित व्यक्ति र मृतकका सन्दर्भमा मानवीय व्यवहार प्रदर्शन हुन वातावरण सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । मानवीय संस्कार र संस्कृतिको रक्षा संकटका बेलामा झनै जरुरी हुन्छ ।
(प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको यो विचार उनको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो ।